संघीय र प्रदेश संसद्‍मा १३ स्थान खाली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
संघीय र प्रदेश संसद्‍मा १३ स्थान खाली
वैशाख ६, २०७८ ऋषिराम पौड्याल
काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रले पार्टी छाडेर एमालेमा लागेकालाई कारबाही गर्न थालेपछि संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्यहरूको पद धमाधम खाली हुन थालेको छ । माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेको सूचना दिएका आधारमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभाका १३ जनाको पद रिक्त भइसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा चार, राष्ट्रिय सभामा एक र प्रदेशसभामा आठ जनाको सांसद पद खारेज भएको हो ।
पछिल्लो पटक आइतबार राष्ट्रिय सभामा वाग्मती प्रदेशबाट निर्वाचित गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सांसद पद खारेज भएको छ । सांसद पद खारेज भएसँगै मन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा आइतबारै गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । माओवादी केन्द्रबाट २०७४ सालमा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा पुगेपछि उनी एमालेमा लागेका छन् । राष्ट्रिय सभामा माओवादी संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले गत चैत २७ गते थापाको पद खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेका थिए । त्यही आधारमा सांसद पद खारेजको सूचना आइतबार प्रकाशन गरिएको थियो । मध्याह्न सांसद पदबाट मुक्त भएका थापाले साँझ गृहमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति भईवरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयका सचिव राजेन्द्र फुयालका अनुसार मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रिय सभामा थापाको स्थान रिक्त भएको लिखित जानकारी आइतबार नै गराइएको छ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभामा अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली–३ का गौरीशंकर चौधरी, कैलाली–४ का लेखराज भट्ट र रौतहट–३ का प्रभु साहको सांसद पद खारेज भएको थियो । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित उनीहरू मन्त्री छन् । रायमाझीले ऊर्जा, भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, साह सहरी विकास र चौधरीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । संसद् नभए पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाइने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थापासहित सबैलाई मन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरिएको हो । उनीहरू सबै एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन भइसकेका छन् ।
माओवादी छाडेर एमालेमा लागेपछि प्रदेश १ का टंक आङ्बुहाङ, प्रदेश २ का ज्वालाकुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा, मोहम्मद समीर र रामचन्द्र मण्डलको पनि सांसद पद खारेज भइसकेको छ । लुम्बिनीका दिनेश पन्थी र दधिराम न्यौपाने, कर्णालीका धर्मराज रेग्मीले पनि प्रदेशसभा सदस्य पद गुमाएका छन् । सुदूरपश्चिमका प्रदेशसभा सदस्य झपट बोहराको पद खारेजीको प्रक्रियामा छ । माओवादी नेता दीनानाथ शर्माका अनुसार राष्ट्रिय सभाका सांसद चन्द्रबहादुर खड्कालाई केन्द्रीय कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको छ । ‘उहाँलाई पनि हामी कारबाही गर्छौं,’ नेता शर्माले भने ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ मा पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । निर्वाचनमा सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मतदान गर्नुपर्छ ।
वाग्मती प्रदेशमा १ सय १९ स्थानीय तहमा छन् । स्थानीय तहमा एमालेको बहुमत छ । अहिले एमालेमा प्रधानमन्त्री ओली र झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । कर्णाली प्रदेशमा खनाल–नेपाल समूहका चार जना सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेकाले यसको असर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैले थापालाई फेरि राष्ट्रिय सभामा ल्याउन एमालेले उम्मेदवार बनाए पनि निर्वाचित हुन चाहिने मतदाता संख्या पुर्‍याउन सजिलो छैन । एमाले नै विभाजनको संघारमा रहेकाले मत विभाजन हुने अड्कल गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गोप्य मतदानका आधारमा हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सांसदले पार्टीको निर्देशनभन्दा फरक ठाउँमा मतदान गरे कारबाही गर्न मिल्दैन । उनीहरूको पद पनि जाँदैन ।
प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०६:५२
सहुलियत कर्जा लिनेमा ९५ प्रतिशत महिला
३८८४१ जनाले कृषिबाहेकका नौ प्रकारका सहुलियत कर्जा लिए
वैशाख ६, २०७८ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा लिनेमा करिब ९५ प्रतिशत महिला छन् । यो गत फागुनसम्म सहुलियत ब्याजदरको कर्जा लिने महिलाको संख्या हो । उक्त अवधिसम्म कुल ७७ हजार १ सय ७६ जनाले सहुलियत ब्याजदरको कर्जा लिएका छन् ।
तीमध्ये ३८ हजार ३ सय ५५ जनाले कृषि कर्जा लिएका छन् । बाँकी ३८ हजार ८ सय ४१ ले कृषिबाहेकका नौ प्रकारका सहुलियत कर्जा लिएका छन् । सहुलियत ब्याजदरको कर्जा लिने महिलाको संख्या ३६ हजार ७ सय ६३ जना छ । यो कृषिबाहेक नौवटा शीर्षकमा प्रवाह भएको कुल कर्जाको ९४.६५ प्रतिशत हो ।
स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सहुलियत ब्याजदरको कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण पछिल्ला महिनामा महिलाको आकर्षण उल्लेख्य बढेको बैंकरहरू बताउँछन् । सरकारले ब्याज अनुदान दिने १० प्रकारका कर्जामध्ये कृषिबाहेकमा सबैभन्दा धेरै ऋण लिने महिला उद्यमी नै रहेको सरकारी तथ्यांक छ । यो कर्जा लिन महिलाका नाममा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भएको हुनुपर्छ । यस्तो कर्जामा महिलाले सरकारबाट ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन् । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत ब्याजदर तय गरे ६ प्रतिशत ब्याजदर सरकारबाट अनुदान पाइन्छ । बाँकी ४ प्रतिशत मात्र महिला उद्यमीले तिर्नुपर्छ । यो शीर्षकअन्तर्गत महिलाले बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले २०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । यसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम २०७३ मै आएको हो । पछि यो कर्जालाई पनि सरकारले सहुलियत ब्याजदरको कार्यविधिअनुसार समेटेर एकीकृत कार्यक्रम बनाएको हो । सहुलियत दरको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम (ब्याजदर) थप गर्न पाउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म महिला उद्यमी शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत असारमा यो शीर्षकमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुनसम्म करिब ७७ हजार २ सय ऋणीले सहुलियत कर्जा सुविधा लिएका छन् । ती ऋणीका लागि १ खर्ब २४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।
गत पुससम्म प्रवाह भएको सहुलियत कर्जामध्ये कृषिबाहेकका सहुलियत कर्जा सुविधा पाउने २७ हजार ६२ जना छन्  । ती ग्राहकले ब्याज अनुदानमा २३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् । कृषिबाहेकका शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जामा पनि करिब ५० प्रतिशत (३८ हजार ३ सय ५५ जना) ले महिला उद्यमशीलता कर्जा लिएका छन् । बाँकी आठ प्रकारको कर्जा लिने ग्राहकको संख्या निकै कम छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । सोही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषिबाहेकका सहुलियत ब्याजका कर्जाको सीमा तोकिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ असारसम्म तोकिएको संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
२०७८ असारसम्म वाणिज्य बैंकले न्यूनतम पाँच सय, विकास बैंकले न्यूनतम दुई सय र वित्त कम्पनीले एक सयवटा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले १० वटा र विकास बैंकको शाखाले पाँचवटा सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था घोषणा भयो । सोही व्यवस्थालाई समेटेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले कम्तीमा पाँच सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले कम्तीमा तीन वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्न र यस्तो कर्जामा लक्षित क्षेत्र अनि वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक तोकिएको संख्यामा अन्य १० प्रकारका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको थियो । पछि कार्यविधि संशोधन गरी कपडा उद्योग र सीटीईभीटीलाई पनि जोडेर नौ प्रकारको कर्जा कार्यक्रम बनाइयो । पछि फेरि युवा स्वरोजगार शीर्षक पनि थपेर सहुलियत ब्याजदरको कर्जा १० प्रकारको बनाइएको छ ।
प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०६:५१
ओलीको विकल्प खोज्नैपर्छ, सबैले आत्मसमीक्षा गरौं : डा. भट्टराई
प्रधानमन्त्री पदका लागि कसैको दाबी आएन : राष्ट्रपति कार्यालय
आन्तरिक उडान अनिश्चितकालका लागि बन्द
ओलीलाई ठाकुर र महतोले दिए बधाई, एमालेले बहुमतको सरकारमा दाबी नगर्ने
अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयको अपील
माधव नेपालले धोका दिएकै त नभनौं तर हाम्रो सरकारचाहिँ नबन्ने भयो : नारायणकाजी
Baltra Induction Cooker
Big Choice Jeera Masino
अझै कति शव गनेर बस्ने !
शेखर कोइराला वैशाख ३०, २०७८
देश यति बेला कोभिड–१९ को संक्रमणबाट आक्रान्त छ । कोरोना भाइरस सुनामीझैं फैलिएको छ । संक्रमित र मृतकको ग्राफ असाध्यै कहालीलाग्दो छ । काठमाडौं उपत्यका...
बजेटको अनुहारै बदल्ने हो कि ?
हरि रोका वैशाख ३०, २०७८
राष्ट्रपति स्वयंबाटै मुलुकको संविधान बरखास्तगीमा परेन भने यस पटक पनि जेठ १५ मा बजेट भाषण हुनेछ । यद्यपि भाषण गर्ने अर्थमन्त्री बहालवाला हुन्छन् या अर्को, यकिन...
भगवान्‌कै भरोसा !
चन्द्रकिशोर वैशाख ३०, २०७८
झन्डै डेढ दशक जनप्रतिनिधिविहीन बनेका स्थानीय तहहरूले स्थानीय सरकारका रूपमा गर्न थालेको अभ्यासले तीनचौथाइ समय पूरा गरिसक्यो । यस अवधिमा महाव्याधिको छालले लगातार दोस्रो पटक छोप्यो ।
सार्थक वैदेशिक सहयोग खोज
सम्पादकीय वैशाख ३०, २०७८
गत वर्ष जतिबेला इटाली कोभिड संकटबाट अतालिइरहेको थियो र स्थिति सरकारको काबुबाहिर थियो, त्यही बेला चीनले ८ हजार किलोमिटरभन्दा टाढाको रोममा कैयौं टन स्वास्थ्य सामग्रीसहितको...
महामारीमा सत्ता राजनीति
किशोर नेपाल वैशाख २९, २०७८
हामी कोरोना महामारीलाई, हाम्रा विरुद्ध मात्र होइन, सम्पूर्ण मानवताका विरुद्ध भयंकर ठूलो चुनौतीका रूपमा भोगिरहेका छौं । यस महामारीका अनेक ‘भेरियन्ट’ लगातार मानव सभ्यताको विनाशमा...
आर्थिक सम्भावना र महामारी व्यवस्थापन
समीर खतिवडा वैशाख २९, २०७८
हरेक वर्ष बजेट भाषणपछि धेरै सम्भावना देखिने गर्छन् । बजेटले सरकारका आगामी प्राथमिकताहरूलाई उजागर गर्छ, जुन भविष्यका लागि आवश्यक हुन्छन् । तर, हाम्रा अनुभवले त्यस्ता प्राथमिकताहरूले आकार...
सेनाको तीन–जोड–एक कमान्डको औचित्य
सुरेन्द्रसिंह रावल वैशाख २९, २०७८
नेपालमा पहिले नसुनिएको तीन–जोड–एक (थ्री–प्लस–वान) कमान्ड अवधारणा महारथी पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति भएपछि पहिलो पटक चर्चामा आयो, जसलाई उनले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि र ‘लिगेसी’ का रूपमा...
पहिले स्वास्थ्य अनि बिहेभोज
मधु राई वैशाख २९, २०७८
गत वर्षको जस्तै यसपालि पनि कोरोना–कहरबीच धेरैको बिहे भयो, गरियो । घरआँगनमा पाल टाँगेर वा पार्टी प्यालेसमा तामझामका साथ बिहेभोज पनि खुवाए । कतिपय जोडी भने कहिले...
दलहरूले दिनुपर्ने निकास
सम्पादकीय वैशाख २९, २०७८
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकार आफ्नै अहम्‌को रागमा चाउरिँदै गएर अन्ततः संसद्‌मा विश्वासको मत जोगाउन पनि विफल भएको छ । तीन वर्षअघि २०७४...
सत्ता जोडघटाउमा बन्धक राजनीति
राजाराम गौतम वैशाख २८, २०७८
अहिले नेपाली समाज र नेपाली राजनीतिले उस्तै नियति भोगिरहेछन् । दुवैमा चरम संक्रमण छ र दुवैमा अंकगणित हावी छ । समाज कोरोनाबाट मृतकको संख्या गनिरहेछ...
अपडेटः बिहीबार, ३० वैशाख, २०७८ । २१ : ०० बजे